Haddii aad raadineyso jawaabta su'aasha, marka arooska jilicsan iyo waxa la siinayo lammaane farxad leh - maqaalkayagu waa adiga. Immisa sannadood ma u dabaaldegaan arooska jilicsan ? Arooska Ruby waxaa loo dabaaldegaa afartan sano oo wada nool. Calaamadda arooska jilicsani waa xaqiiqda dhagaxa jacaylka iyo dabka, dareen aan qancin lahayn - midab qaali ah. Waxaa la aaminsan yahay in afartan sano guursatay, dadku waxay noqdaan qaraabo dhiig.
Waxaa jira dhaqan qadiimi ah, oo loo eegayo, lamaanaha maalintaas waa in ay baddalaan siddooyinkooda arooska cusub, kuwaas oo ay ku jiraan jilicsan, iyo kuwa duugoobay.
Ma ogtahay waxa la siinayo si loo guuriyo guurkii guurku Hadiyado dhaqameedku waa dahab laga helo dahabka. Munaasabadda xafladaha, ninkeeda iyo xaaskiisa ayaa ku martiqaaday qaraabadooda, saaxiibo badan, dabcan, carruurta iyo awoowayaasha, iyo awoowaha weyn. Marka lagu daro dahabka dahabiga ah, muraayadaha waxay soo bandhigi karaan hadiyado kale oo qaali ah. Qalabka guriga, mishiinka jikada, alaabta jikada, waraaqaha fasaxyada - dhamaantani waxay noqon kartaa hadiyad aad u fiican oo loogu talagalay aroosyada jilicsan ee loogu talagalay geesiyadaada qaaliga ah. By habka, waxay noqon doontaa mid aad u fiican haddii hadiyado midab casiir ah.
Waa arrin waxtar u leh dembiilayaasha dabaaldega si loo helo liis la isku daro hadiyado la jecel yahay - ka dibna martida ayaa ogaan doona waxa ay tahay in la keeno jubilee.
Marka laga jawaabo martida qaaliga ah, lammaanuhu waa inay daboolaan miis madow oo leh noocyo kala duwan oo suxuun leh. Miisaska xafladu waa inay ahaataa mid aad iyo aad u fiican. Marka aad jidka ku dhejisid, waxaad dhigi kartaa gogol casaan ama aad u diyaarisid nambarka cas. Ku rid miiska miiska ama cabitaanka rummaanka , khamriga cas, tufaax miraha leh miraha ama miraha midabyada casaanka: canab, tufaax, nectarines, strawberries, jeeriga, raspberries. Arooska Ruby ma aha dabaal, kaas oo noqon doona miiska cuntada ku habboon, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddaraan menu ka hor.
Guul weyn oo ah xaflad aroos ah oo loogu talagalay arooska jilicsan wuxuu noqon karaa miro cajiib ah, oo si qurux badan loo hindisay. Waxay noqon kartaa casaan, calaamadee jilicsan ama, waxaa lagu qurxin karaa tirooyinka 40. Haddii kale, waxaad ku dhejin kartaa sawir on cake laga bilaabo maalintii arooska, sameeyey afartan sano ka hor. Qofka noocan oo kale ah wuxuu qof kasta u rukunsan yahay isagoo aan ka reeban.
Haddii firfircoonida dabaaldega ay leeyihiin rabitaan, waxaa suurtagal ah iyaga iyo martida si ay u diyaariyaan barnaamij feyreed xiiso leh iyo qori warqad fasax ah ee arooska yar.
Arooska Ruby waa dhacdo fasax ah
Abaabulayaasha dhacdada waxay horay u diyaarinayaan filim ka hor sawirada ka badbaaday iyo fiidiyowga feylka lagu ururiyey inta lagu guda jiro noloshaa dheer ee qoyska waxayna muujinayaan bilawga fiidkii festifiga. Xiddiga ugu horreeya waxa si fiican loo siiyaa carruurta jubilees. Carruurta, iyo sidoo kale awoowe-u-jubilee, waxay bilaabaan inay waalidkood ka yaabiyaan subaxnimadii. Waxaad iyaga u soo bandhigi kartaa wax la yaab leh qaababka gacanta ee kubadaha cas iyo casaan. I rumaysta, "dhawaanaha cusub" waxay noqon doontaa mid aad u faraxsan, niyadda festiguna waa la hubaa subaxnimadii.
Ku marti qaado dhalinyaro iyo timo jarjareyaha guriga si ay u sameeyaan dhammaan xubnaha qoyska oo leh timo qurxin iyo qurxiyo.
Wixii dembiilayaasha ah ee dabaaldegga, waxaad samayn kartaa taajajyada, si ay xaq ah u dareemaan naftooda boqor iyo boqoradda fasaxa. Ha tagaan qolka munaasabadda ama qolka miiska la dhigo, haddii aad u dabaaldagto guriga, muusikada Mendelssohn, oo midba midka kale gacanta ku hayso.
Samee shahaadada lamaanaha ah "Abaalmarin qoys oo guuleysata" ama "Jacaylku waa giraan, giraanguna ma dhamaado," waxay ku qoraan farsamooyinka joornaalka iyo qiimaynta "ardayda". Soo saar tartamo xiiso leh, oo ay ku jiraan barnaamijka "miiska", iyo mobile.
Sida loo helo lover, haddii aad isqabtaan?
Talo-cilmi-nafsi: cilmi nafsiga joogtada ah ee ninkaa - maxaad samaynaysaa?
Sidee u noolaan kartaa furiinka dumarka?
Sida loo soo jiito dareenka ninkeeda haddii uu hoos u qaboojiyo?
Fikradda guurka iyo qoyska
Guurka madaniga ah - ee loogu talagalay ama ka hor imanaya
Murugo leh ninkeeda
Fikrado xiiso leh arooska
Sidee loo soo celiyaa aaminaadda?
Josh Duhamel, oo ogolaansho ka ah Fergie, ayaa wiilkiisa 4-sano jirka ah siiyay ciyaaraha
Sidee looga takhalusaa maandooriyaha?
Hoyga dumarka leh gacmahooda
Playhouse ee caruurta
Immisa kaloori ayaa ku jira digaagga la kariyey?
Daryeelka qalabka korontada
Nuqul digaag leh oo leh champignons
Dhalashada dhalaanka ee carruurta
Gates ka samaysay guddiga ololka
Joshta - beeritaanka iyo daryeelka
Ardayda la kordhiyay ayaa ah sababaha
Tartanka hoose ee jilibka
Turkiga leh tufaax
Xanuunka murqaha ee iliga
Xilliga Gu'ga 2014
Boorash laga sameeyey xayawaan badan
12 waxyaabaha aad lacag u qoondayso
Marka ugu horreysa bilaha, Janet Jackson ayaa u muuqday meel dadweyne ah
Jooniska duurjoogta - guryaha dawooyinka ah
Hornwort-warshad samafal ah - qurxin aan qabyo ahayn oo loogu talagalay dadka bilawga ah
Comfrey officinalis - isticmaal